प्रत्येक सामग्री रणनीति एक कहानी आवश्यक छैन Martech Zone
बुधवार, जनवरी,, २०१२ सोमबार, जनवरी 15, 2018 Douglas Karr
कथाहरू जता पनि छन् र म यसबाट बिरामी छु। प्रत्येक सामाजिक मिडिया अनुप्रयोगले उनीहरूलाई मेरो अनुहारमा फ्याँक्न खोज्दछ, प्रत्येक वेबसाइटले मलाई उनीहरूको क्लिकबाइट कथामा आकर्षण गर्ने प्रयास गर्दैछ, र अब प्रत्येक ब्रान्ड चाहन्छ भावनात्मक हिसाबले मसँग अनलाइन जडान गर्नुहोस्। कृपया यसलाई रोक्नुहोस्।
कारण म किन कथाहरू थकित हुँदै छु:
धेरै मानिसहरु छन् भयानक कथाहरू बताउँदा।
धेरै व्यक्तिहरू छैनन् खोज्दै कथाहरू हाँसो!
मलाई थाहा छ म त्यहाँ कन्टेंट प्रोफेश्नर्सलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैछु कि कवितालाई वैक्स गर्न, प्रामाणिकता निर्माण गर्न, र उनीहरूको दर्शकहरू, श्रोताहरू वा पाठकहरूको भावनाहरू क्याप्चर गर्न मनपर्दछ।
मास्टर कथानकले भनेका उत्तम कथा भन्दा राम्रो अरू केही छैन। तर यो बताउनको लागि एक महान कथा वा एक महान कथाकार फेला पार्ने निकै विरलै छ। उत्कृष्ट कथाकारहरूले उत्कृष्ट कथा कथाहरूबाट फाइदा लिन्छन् किनकि यो उनीहरूको व्यवसाय हो!
त्यो हुन सक्दैन आफ्नो व्यापार।
मा अवतरण गर्दै मानिसहरूलाई अनलाइन कार्य गर्न प्रेरित गर्ने कुरामा Google ले एक अनुसन्धान गर्‍यो बिभिन्न क्षणहरु जहाँ व्यवसाय र उपभोक्ताहरूले कारबाही गरे।
मलाई थाँहा पाउन मन छ क्षणहरू
म जान चाहान्छु क्षणहरू
म गर्न चाहन्छु क्षणहरू
म किन्न चाहन्छु क्षणहरू
अवश्य पनि, यदि खरीददारसँग समय हेर्न, सुन्न, वा पढ्नको लागि समय छ भने, तिनीहरू तपाईंको ब्रान्डसँग अनलाइन गहिरो व्यस्त हुन सक्छन्। तर म तर्क गर्छु कि यो विरलै छ। र म विश्वास गर्दछु उद्योग तथ्या .्कले मेरो आधारलाई समर्थन गर्दछ। एक उदाहरण दोहोरो अंकको वृद्धि र लोकप्रियता हो (२-मिनेट भन्दा कम) "कसरी गर्ने" भिडियो अनलाइन। मानिसहरूले कथाहरू खोजिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्ना समस्याहरूको समाधान खोज्छन्।
मैले भनेको छैन कि तपाईंको कम्पनीले कथा कथन पूर्ण रूपमा त्याग्नु पर्छ। जब हामी अनुसन्धान गर्छौं र सम्मोहक कथा विकास गर्छौं, तब हामी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि डिजाइन गरिएको इन्फोग्राफिक्स र ह्वाइटपेपर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछौं। जहाँसम्म, हामी धेरै अरू व्यक्तिहरू आउँदैछौं र हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरूमा रूपान्तरण गरिरहेका छौं जब हामी उनीहरूको समस्या समाधान गर्न समाधान प्रदान गर्दछौं।
जबकि तपाईंको सामग्रीको एक स्लाइसले तपाईंको कम्पनीको अस्तित्व, तपाईंको संस्थापक, वा ग्राहकहरू जसले तपाईंलाई सहयोग गरिरहेको छ भन्ने आकर्षक कथा बताइरहेको हुनुपर्दछ, तपाईंसँग संक्षिप्त, सुस्पष्ट लेखहरू पनि हुनु आवश्यक छ जुन कुरा:
कसरी समस्या समाधान गर्ने।
तपाईंको समाधानले कसरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।
किन तपाईको समाधान फरक छ।
किन तपाईंलाई विश्वास गर्न सकिन्छ।
कसरी तपाइँका ग्राहकहरु तपाइँको खर्च लाई औचित्य साबित गर्न सक्दछन्।
उदाहरण १: उच्च टेक, कुनै कहानी छैन
NIS हो राष्ट्रिय मानक र टेक्नोलोजी को संस्थान। तिनीहरू प्रायः लामो अनुसन्धान रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्दछन् जसले पहुँच नियन्त्रण, व्यवसाय निरन्तरता, घटना प्रतिक्रिया, प्रकोप पुनर्प्राप्ति र अधिक धेरै प्रमुख क्षेत्रहरू जस्ता शीर्षकहरूको लागि नीतिहरू र प्रक्रियाहरू सिफारिस गर्दछन्। PDF हरू अविश्वसनीय रूपमा विस्तृत छन् (कुनै पनि औपचारिक अनुसन्धान कागजात हुनुपर्दछ), तर प्राय जसो आईटी र सुरक्षा विज्ञहरूले टेकवेलाई बुझ्न आवश्यक छ - हरेक विवरण अध्ययन गर्दैन।
हाम्रो ग्राहक, लाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डाटा सेन्टर ईन्डस्ट्रीमा नवाचार र सुरक्षामा विशेषज्ञहरूको नेतृत्वको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। वास्तवमा, तिनीहरू एक निजी डाटा सेन्टर हो जुन फेडरल सुरक्षा आवश्यकताहरूको उच्च स्तर जानिन्छ - एफईडीआरम्प। सह-संस्थापक रिच बंता यस ग्रहमा सबैभन्दा प्रमाणित विशेषज्ञ मध्ये एक हो। त्यसोभए, सम्पूर्ण कागजातलाई पुनर्गठन गर्नुको सट्टा रिचले हाम्रो टोलीद्वारा अनुसन्धान गरिएको र एउटा रिपोर्टको व्याख्या गर्ने सारांशलाई अनुमोदन गर्दछ। नमूना - NIS 800-53.
ती लेखहरूको मूल्य यो हो कि यसले उनीहरूको सम्भाव्यता र ग्राहकहरूको धेरै समय बचत गर्दछ। रिचले निर्माण गरेको मान्यताका साथ, अनुसन्धानको सारांश उनको श्रोता द्वारा भरोसा र मूल्यवान छ। कुनै कहानी छैन ... केवल कुशलतापूर्वक उत्तर दिँदै मलाई थाँहा पाउन मन छ उसको श्रोताको आवश्यकता।
उदाहरण २: मूल्यवान् अनुसन्धान, कुनै कहानी छैन
हाम्रो ग्राहकहरूको अर्को एक पाठ्य सन्देश मार्फत उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता लिने भर्ती पेशेवरहरूको लागि एक अग्रणी-धार समाधान हो, क्यानभास। यो यस्तो नयाँ प्रविधि हो कि यस ठाउँमा यस प्रकारको प्लेटफर्मको खोजीमा कोही पनि छैनन्। यद्यपि उही निर्णयकर्ताहरूले अन्य जानकारी अनलाइन खोजिरहेका छन्। हामीले उनीहरूको टोलीलाई अनुसन्धान गर्न र एक सूची विकास गर्न मद्दत गरेका छौं कम लागतमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कि सगाई बढावा, अवधारणा र लगानी मा एक ठूलो फिर्ती छ।
फेरि, त्यहाँ कुनै कहानी छैन - तर यो एक राम्रो अनुसन्धान, व्यापक, र मूल्यवान लेख हो कि उत्तर म गर्न चाहन्छु जब रोजगारदाताहरूले कामदारहरूको लागि नयाँ सुविधा लागू गर्न खोजिरहेका हुन्छन्।
तपाइँको संभावना के हेर्दै हुनुहुन्छ?
फेरि, म महान कथनको शक्तिलाई बेवास्ता गरिरहेको छैन, म मात्र सल्लाह दिदैछु कि यो तपाईंको उपकरण बाकसमा केवल उपकरण मात्र होइन। सही प्रॉस्पेक्टका लागि तपाईंले सही उपकरण छान्नु पर्छ। तपाइँको दर्शकले के खोज्दैछ भनेर पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूलाई प्रदान गर्नुहोस्।
यो सँधै कथा हुँदैन।
टैग: क्यानभास भर्तीकर्मचारी भत्ताउच्च प्रविधिhrम किन्न चाहन्छुम गर्न चाहन्छुम जान चाहान्छुमलाई थाँहा पाउन मन छलाइफलाइन डाटा केन्द्रहरूभर्तीकथाकहानी
De घातक गल्तीहरू जसले साइटहरूलाई सुस्त बनाउँदछ
जनवरी 13, 2018 मा 6: 29 एएम
धेरै जानकारीमूलक पोष्टको लागि धन्यवाद डगलस। मलाई थाहा छ कि सामग्री राजा हो तर यो आवश्यक छैन कि तपाईं सामग्री १००० + शब्दहरू हुनुपर्दछ। म विश्वास गर्दछु कि तपाईंको सामग्रीसँग केहि अद्वितीय जानकारी हुनुपर्दछ र जसले आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ। लम्बाइ कत्ति फरक पर्दैन
जनवरी १, २०१ 13 १२::2018 अपराह्न
पूर्ण रूपमा सहमत - एक हदसम्म। विस्तृत रूपमा लेख्नु बिना कुनै शीर्षकको बारेमा राम्ररी लेख्न यो धेरै गाह्रो छ। र तपाईले खोज्ने शब्दहरूको लागि धेरै थोरै उच्च-पृष्ठहरूका पृष्ठहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन १,००० शब्द मुनि रहेका उत्पादन वा सेवा खोज्दै खोज्दा। म यो नियम होईन भनेर भनिरहेको छैन ... तर मँ भन्न चाहन्छु एकदम पूर्ण हो।